Riseup: စိတ်ဝင်စားဖွယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲများအတွက် | Linux မှ
တခါတလေအပြင်ကိုထွက်ရတယ် အပလီကေးရှင်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့်စနစ်များအကြောင်းသတင်းသို့မဟုတ်သင်ခန်းစာများကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းလေ့ရှိသောအသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုစူးစမ်းလေ့ရှိသည် အခမဲ့နှင့်လက်လှမ်းမီသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၎င်းသည်လည်းတက်ကြွစွာပါဝင်ကူညီသည် အခမဲ့ဆော့ဝဲများဖြင့်သွားလာလှုပ်ရှားသည်မရ။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစာအုပ်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ရည်စူးတယ် "ထပါ".
"ထပါ" လောလောဆယ်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ လူနှင့်အဖွဲ့များအတွက်အလုပ်လုပ်သည် libertarian လူမှုအပြောင်းအလဲမရ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ရည်ရွယ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျနည်းလမ်းများဖန်တီးပါ y မိမိကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ပါ ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်
၏ခေါင်းစဉ်သို့အပြည့်အဝရတဲ့မီ "ထပါ"သတိပြုသင့်သည်၊ အခြားအရာတို့တွင်ဖြစ်သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများ ပိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းများသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများအရင်တုန်းကငါတို့ကအခြားသူတွေကိုစူးစမ်းပြီးပြီ ဆက်စပ်ရေးသားချက်များမရ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာစောင်ကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုလိုအပ်လျှင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုချက်ချင်းချန်ထားပါမည်။
"NOGAFAM: ၎င်းသည်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်သူသည်လက်သီးဆုပ်။ လေထဲမှာမြှင့်လိုက်သည်၊ အနည်းငယ်သောဤနည်းပညာအချုပ်အခြာအာဏာကိုအဆုံးသတ်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှု / ဆော့ဝဲများစွာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သောဒေတာများကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကိုပံ့ပိုးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်း။ ပို၍ ရေရှည်တည်တံ့သောဘဝ၊ လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးအရ" NoGAFAM - အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှု
1 Riseup: အခမဲ့ဆော့ဝဲလှုပ်ရှားမှု
1.1 Riseup ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ထိုပရောဂျက်နှင့်လှုပ်ရှားမှု / စုပေါင်းမှုတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
"libertarian လူမှုပြောင်းလဲမှုအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့အုပ်စုတွေအတွက်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးချယ်စရာများဖန်တီးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကျင့်သုံးရန်ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း၏ ဦး တည်ချက်သည်ဒီမိုကရေစီ၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ ကွဲပြားမှု၊ လုံခြုံရေး၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု၊ အပြန်အလှန်မှီခိုမှု၊ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဂေဟဗေဒနှင့်စီးပွားရေးဖြစ်သည်။"
ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ ထိန်းသိမ်းသူ သူတို့ကအဲဒါကိုထည့်တယ်။
"Riseup သည်လူမှုအပြောင်းအလဲအတွက်အလုပ်လုပ်နေသောလူနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းပေးသောအခြေခံလူတန်းစားနည်းပညာများကိုဖန်တီးရန်မမောတမ်းအလုပ်လုပ်သည်။ မင်းအခကြေးငွေမယူတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမင်းလက်ခံလိုက်တာနဲ့သူတို့ကမင်းကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကပိုက်ဆံရနိုင်ခြေများပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Riseup သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်သုံးစွဲသူများ၏လှူဒါန်းမှုများအပေါ်မူတည်သည်၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများအားထိန်းသိမ်းရန်ယုံကြည်သည်။"
"ထပါ" သူ၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှတဆင့်ရှင်းပြသည် "Riseup ဓာတ်ခွဲခန်းများ"၊ တက်ကြွစွာပါဝင်ကူညီသည် အခမဲ့ဆော့ဝဲများဖြင့်သွားလာလှုပ်ရှားသည်မရ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအသုံးပြုရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘုံကောင်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုယူဆသည်။
Free Software အတွက်ပံ့ပိုးမှုများတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
လုံခြုံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများသစ်ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များ၊ မေးလ်ပို့ဆောင်ရေး၊ webmail နှင့်နာမည်ကျော် web hosting tools များအပါအ ၀ င်ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းများပါ ၀ င်သည်။
မြဝတီလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် virtual အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော open source web application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်သည်သင်၏အခြေခံအဖွဲ့အစည်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
မျောက်များssh ဆက်သွယ်မှုများကိုအတည်ပြုရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော OpenPGP ဝဘ်ကိုသုံးရန် software software တစ်ခု။ ထို့အပြင်၎င်းသည် PKI လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော OpenPGP web ကိုသုံးသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရုပ်သေးRuby တွင် Ruby၊ cross-platform နှင့်ရေးထားသောအစွမ်းထက် configuration configuration tool တစ်ခုဖြစ်သော Puppet ၏ modules အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးသည်။
debian grimoire-အခြားအဖွဲ့အစည်းများအားရှုပ်ထွေးသည့် open source နည်းပညာများ၊ အထူးသဖြင့်အခြေခံလူတန်းစားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်သင်၏ website တွင်တင်ထားသော step-by-step tutorials များဖန်တီးခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်း။
Debian GNU / LinuxRiseup စုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်အများအပြားသည် Debian (အကျိုးအမြတ်အတွက်ဖန်တီးထားသောတစ်ခုတည်းသောဖြန့်ဖြူးရေး) ဖြစ်သည်။
သင့်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက အခမဲ့ဆော့ဝဲများအတွက်ပရောဂျက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများ အောက်ပါတို့ကိုသွားကြည့်ပါ link ကိုမရ။ သူတို့ကိုဖြန့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့သတိရပါ လှူဒါန်းခြင်းထို့ကြောင့်သူတို့သည်အခမဲ့ဆော့ဝဲ၊ Open Source နှင့် GNU / Linux တို့ကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးနိုင်ကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့«လို့ခေါ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးစာစောင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ငါတို့အကြံပြုပါတယ်။အင်တာနက်ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောကွန်ရက်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဆာဗာများ»ငါတို့ပြောပြီးသားနေရာ "ထပါ" စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြားအလားတူစီမံကိန်းများ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် (သို့) ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲထားသောဆာဗာများ.
တိုတိုပြောရရင် "ထပါ" တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အသုံးဝင်ပြီးအစားထိုး ၀ က်ဘ်ဆိုက် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ငွေချေးခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောငွေပမာဏဖြစ်သည် အခမဲ့နှင့်လက်လှမ်းမီသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လည်းထို အခမဲ့ဆော့ဝဲလှုပ်ရှားမှုတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ကူညီခဲ့သည်မရ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအထူးဆော့ဝဲအခမဲ့၊ Open Source နှင့် GNU / Linux တို့ကိုပံ့ပိုးပေးသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးကောင်းမွန်သော website တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » Riseup: စိတ်ဝင်စားဖွယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲအတွက်လှုပ်ရှားမှု